विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस | Hamro Patro
विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस विशेष अडियो सामाग्री
सन् २०१८ मार्च २० तारिख
विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस, आज मार्च २० मा । मुख भनौं या मौखिक अझ मुख भित्रको स्वास्थ्यको दिवस भनौं आज । नारा छ यस वर्षका लागि से आः! अर्थात (मुख) आः गर भन्ने । यसो भन्दा मुख खोल्न पर्ने हुन्छ र मुख भित्रका स्वास्थ्य राम्रा भएमा मान्छेले खुलस्त अनि स्वतन्त्ररुपमा मुख खोल्दछ भनेर यस्तो नारा राखिएको हो ।
स्पेनको मेड्रिडमा भएको डेन्टल कांग्रेसले हरेक वर्ष यस दिवसका लागि नयाँ नयाँ नारा बनाउने कार्य गर्दछ । यस वर्षको नारा नै आः गर र मुखको स्वास्थ्य अनि पूर्ण स्वस्थ्यको बारेमा सोच भन्ने रहेको छ । सामान्यतया दन्त चिकित्सक कहाँ हामी जाँदा मुख खोल्नुहोस् त भन्दा आः गर्नुहोस् भन्ने गर्दछन्, याद गर्नुभएको छ ?
मुखलाई त स्वास्थ्यको दर्पण नै मानिन्छ, मान्छेको मुखको स्वास्थलाई उसको व्यक्तित्वसंग जोडेर हेरिन्छ । मुखको स्वास्थ्य अनि सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्य अत्यन्त निकट कुराहरु हुन् । मुख नै हरेक खाना अनि सरसफाईको मुख्य बाटो हो, हैन र ?
मुख नै फोहोर भएमा शरीर स्वस्थ कसरी रहन सक्छ र ?
आजको दिनले मुखको स्वास्थ्यसंग सम्बन्ध राख्ने अन्य संक्रमण र रोगहरुको जनचेतना फैलाउने काम गर्दछ । जस्तै कि मधुमेह, हृदयरोग झैं कार्डियो भास्कुलर रोगहरु अनि श्वासप्रश्वासका रोगहरु मुखको स्वास्थ्यसंग सम्बन्ध राख्ने रोगहरु हुन् ।
यी कुराहरु हामीले आउने पुस्ताहरुमा पनि सिकाउन जरुरी मानिन्छ । बढ्दो फास्ट फुड, चिसो तातो खाने चलनले बालबालिका्हरु झनै मुखको स्वास्थ्यको जोखिममा रहन्छन्, विश्वव्यापी तथ्याकंका अनुसार केवल १३ प्रतिशत आमाबुवाले मात्र आफ्ना सन्तानलाई पहिलो जन्मदिन अघि दन्त चिकित्सककोमा लग्ने गर्दछन् ।
बच्चालाई पीडा भएपछि मात्र दन्त चिकित्सककामा लिएर जाने आमाबुवाको प्रतिशत २३ प्रतिशत छ । वास्तवमा पीडा हुनु अगावै नै चिकित्सकका मा रोकथाम अनि जाँचका लागि लान जरुरी छ । र अझ जरुरी छ उनीहरुको मुखको स्वास्थ्यका लागि जरुरी बानी व्यहोराहरुको शुरुवात । नियमित दन्त परीक्षण, दाँतको राम्रो सुरक्षा र स्वस्थ खानेकुराहरु मुखको ख्याल राख्नका लागि जरुरी कुराहरु हुन् । खैनी, चुरोट लगायतका विभिन्न अम्मलको सेवनले पनि मुखको स्वस्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ, अझ हाम्रो देशमा यस्ता अम्मलको प्रयोग समाजका सस्कार मै जोडिएको सम्म पनि छ ।
यो राम्रो कुरा हैन, स्वस्थ हुनु नै धन हो हैन र ? अहिले त झन विभिन्न टुथपेस्ट अनि केही सुन्दरताका उत्पादनका विज्ञापनले मुखको स्वास्थ्यलाई धेरै उजागर गरेको छ तर मुखलाई स्वस्थ राख्न त्यति पनि जटिल छैन जति ति उत्पादनहरुले व्याख्या गर्दछन् । सानै उमेर देखि दिनहुँ सफा गर्ने, पखाल्ने, प्रभावकारी तरिकाले ब्रश र पेस्ट लगाउने गर्नाले दाँतको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । ब्रश गर्दा धेरै घोटेर गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गलत हो, उपयुक्त तवरले तलमाथि गर्दै ब्रश गर्नु जरुरी हुन्छ । अन्य कुरामा हजारौं खर्च हुँदा पनि वास्ता नगर्ने औसत नेपाली हामी दाँत मोल्ने ब्रश चाहिँ खासै खर्च गरेर राम्रो किन्दैनौं, किन होला ?
मुखको स्वास्थ्यमा लगानी गर्न यस वर्षको ओरल हेल्थ दिवसले सबैलाई सिकाओस् ।
मुख खोलेर हाँसौं, हृदय खोलेर हाँसौं ।
हाम्रो पात्रोका लागि सुयोग ढकालले तयार गर्नुभएको ।